Shiinaha 1.3T, 2.5T, 5T, 10T birta birta birta hore Magnet For Anchor Fixing saarayaasha iyo alaabada | Meiko Magnetics
Birta birta hore magnet waxaa loogu talagalay loogu talagalay hagaajinta barroosinka kor u qaadista on caaryada dhinaca, halkii caag dhaqameed nasasho hore screwing. Qaabka semi-sphere-ka iyo godka srew ee dhexe ayaa sahlaya in lagalaabo boodhka shubka marka la jarayo.
Fasaxyada birta ah ee birlabta Magnetwaxaa loogu talagalay loogu talagalay hagaajinta barroosinka kor u qaadista ee caaryada dhinaca, halkii caag dhaqameed caadifadeed hore screwing. Qaabka semi-sphere-ka iyo godka srew ee dhexe ayaa sahlaya in lagalaabo boodhka shubka marka la jarayo. Waxaan ka buuxsamay 1.3T, 2.5T, 5.0T, 7.5T ama nooca 10T ee barroosinka xajmi ahaan kala duwan. Khatimidda cinjirka ah ee loo yaqaan 'additonal seal' sidoo kale waa lagama maarmaan in loo isticmaalo in lagu adkeeyo barroosinka si adag godka magnetka hore.
Qaadida Awoodda Barroosinka D d H Ku marooji Xoog
Meiko Magnetics waxay had iyo jeer maskaxda ku haysaa in "hal-abuurnimada, tayada iyo shuruudaha macaamiisha ay yihiin udub dhexaadka shirkadda". Waxaan rajeyneynaa khibradeena ku saabsan golayaasha magnetka inay awoodi karaan fikradahaaga wanaagsan. Waxaad ka heli kartaa dhammaan shuruudahaaga caadiga ah ama nidaamka magnetka loo habeeyay halkan si loo sii dejiyo.
Hore: Neodymium Magnet-ka aan caadiga ahayn oo leh Dahaarka Epxoy Black
Xiga: 350KG, 900KG Loaf Magnet oo loogu talagalay biraha birta ah ee Precast ama Shandada Plywood
1.3T Birlabta Magnet
2.5T Qaadista Magnet
5T Barroosinka Magnet
Magnetic Recessing Hore
Fasaxyada birta ah ee birlabta Magnet